MacOS 3, watchOS 11.5, ary mpamorona tvOS 7.6 beta 14.7 navoaka | Avy amin'ny mac aho
Ora vitsy lasa izay ny developer beta 3 kinova macOS 11.5, watchOS 7.6, ary tvOS 14.7. Raha ny lojika, ny kinova beta 3 an'ny iOS 14.7 dia tonga ihany koa miaraka amin'ny an'ny iPadOS 14.7 ary izy rehetra dia manampy fanatsarana ny fiasa, ny filaminana ary ny fitoniana ao amin'ny rafitra.
Ny orinasa Cupertino dia manohy mamoaka kinova nohavaozina miaraka amin'i fanatsarana mifandraika mivantana amin'ny fitoniana sy filaminana, tsy be ny fanovana hatsarana na fampiasa ampiana mihoatra ireo izay nampiharina tamin'ny andiany voalohany.
Ireo kinova beta rehetra ireo Izy ireo dia efa azo alaina amin'ny alàlan'ny OTA raha toa ka developer ianao. Mety hitranga ao anatin'ny ora vitsy ho avy ireo kinova ireo dia ho hita amin'ny betsa ampahibemaso, ho an'ireo rehetra izay voasoratra anarana.
Aza adino fa ireo kinova beta ireo dia mety misy bibikely, tsy milamina na tsy mifanaraka amin'ny rindranasa ampiasanao isan'andro isan'andro aza amin'ny asa, fialam-boly sns, noho izany dia tsara kokoa ny miala amin'ny lalana ary miandry indrindra ny kinova. avoaka. beta ho an'ny daholobe, indrindra noho ny olana mety hitranga amin'ny Apple Watch. Hikasika antsika izany araho akaiky ny fivoaran'ny kinova beta vaovao. Ny tena marina dia matetika ny kinova beta an'ny Apple dia somary milamina ihany saingy betas izy ireo ary mety misy tsy fitoviana amin'ny fitaovana na fampiharana ampiasaintsika amin'ny asa ary noho izany dia tokony hitandrina isika amin'izay apetrantsika amin'ny fitaovantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Navoaka ny MacOS 3, watchOS 11.5, ary ny tvOS 7.6 developer beta 14.7